Akụkọ - Sistemu ikuku ikuku na ụdị Compressor
Usoro ikuku ikuku abịakọrọ
Sistemụ ikuku jikọtara ọnụ nwere akụkụ ọkọnọ, nke gụnyere compressors na ọgwụgwọ ikuku, yana akụkụ chọrọ, nke gụnyere sistemụ nkesa na nchekwa na akụrụngwa ojiji. Akụkụ nnyefe a na-ejikwa nke ọma ga-ebute ikuku dị ọcha, akọrọ, kwụsiri ike na nrụgide kwesịrị ekwesị n'ụzọ dabere, ọnụ ahịa. Ọnụ ọgụgụ dị n'okpuru na -egosi gị otu sistemụ ikuku na -ejikarị.
Enwere ụdị compressors dị iche iche n'ahịa, nke ọ bụla na -eji teknụzụ dị iche iche emepụta ikuku. Nkọwa nke compressors a na -ejikarị na ụlọ ọrụ na -esote.
1. Compressors na -atụgharị
Compressors na -emegharị ahụ na -arụ ọrụ site na ime piston na cylinder. Enwere ike ịmalite nrụgide n'otu akụkụ ma ọ bụ abụọ nke piston. Maka nnukwu mpịakọta ikuku, ha na -abụkarị ndị kacha ọnụ ahịa maka ịwụnye na ịwụnye, na -achọkwa mmezi ka ukwuu, agbanyeghị, ha nwere ike bụrụ ọnụ ala na obere ike. N'ihi nha ha na ịma jijiji kpatara ha chọrọ ntọala buru ibu yana ọ nwere ike ọ gaghị adabara ebe ikuku na -abata. Ka o sina dị, ha bụ ike kacha arụ ọrụ nke ọma, ma n'ibu ma n'akụkụ.
2. Compressors (ma ọ bụ rotary)
Compressors (ma ọ bụ rotary) compressors na -eji kposara helical meshing abụọ, na -atụgharị n'akụkụ ndị ọzọ iji kpoo ikuku. Compressors ndị a na -abụkarị ọnụ ala kacha nta iji wụnye, maka nnukwu mpịakọta ikuku ikuku. Iji hụ na arụmọrụ kacha dị mma nke ndị na -eji kompas, ọ dị mkpa ka ị tụọ compressor n'ụzọ ziri ezi ma tinye sistemụ njikwa n'ime na mpụga maka ọnọdụ ibu akụkụ. Mmepụta mgbanwe na draịva ọsọ ọsọ na -adịkarị site na ọtụtụ ndị na -ebubata ya. N'okpuru foto a na -egosi gị usoro nke ịpịpị ọkụ.